प्रहरीले घ*ट*ना ढाकछोप गर्दै आरोपित सबैलाई छोडिदिए!!! – News Nepali Dainik
प्रहरीले घ*ट*ना ढाकछोप गर्दै आरोपित सबैलाई छोडिदिए!!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ११, २०७७ समय: ५:२९:४४
र्लाबारी, शंकास्पद मृत्यु भएका व्यक्तिको मिसिलमा असम्बन्धित व्यक्तिको फोटो संलग्न गरेपछि प्रहरीले घटना ढाकछोप गर्न भुमिका खेलेको रहस्य खुलेको छ ।
अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको र आरोपित व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको भन्दै आइतबार पी’डित परिवार र स्थानीयवासीले जिज्ञासा माग्दा प्रहरीले लापरवाही गरेको पाइएको हो । मिसिलमा समावेस गरिएको मृतकको तस्बीरमा चाँदीको सिक्री लगाएको पाइएपछि स्थानीयले केहिबेर इलाका प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्नुका साथै प्रहरी विरुद्ध नारावाजी पनि गरेका छन् । मृतक फेला पर्दा उनको गलामा सिक्री थिएन । यद्यपि प्रहरीले अनुहार नै नचिनिने गलामा सिक्री लगाएको व्यक्तिको तस्वीर घटना मुचुल्कामा संलग्न गरेको पाएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।
परिवारका अनुसार सुरुमा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउने आश्वासन दियो । तर, अहिले घटनाका आरोपित सबैलाई छोडिदिएको छ । मृतक प्रविणका बुबा प्रेमले भने –४ गते घरबाट निस्किएको छोरो ५ गते ११ बजे तिर मर्यो अरे भनेर अ ज्ञात नम्बरको फोनबाट खबर आयो । ‘कहाँ म र्यो, कसरी म र्यो कसले मा र्यो ,हामी परिवारका सदस्यलाई केही थाहा भएन । प्रहरी पनि प्रत्येक पटक अलग अलग बयान दिन्छ । म र्ने त मर्यो तर न्याय म र्नु भएन नि’ – उनले भने ।
छोराको शव मृत अवस्थामा गोदावारी अस्पतालमा भेटिएपछि परिवारले प्रविणलाई त्यहाँसम्म कसले ल्यायो भन्ने सम्म थाहा छैन । म रेको ब्यक्तिलाई एम्बुलेन्समा हालेर ल्याइएको परिवारको दाबी छ । तर, प्रहरीले प्रविणको ढुकढुकी भएको अनुमानमा अस्पताल पुर्याएको दाबी गरेको छ । यद्यपि परिवारले अस्पताल स्रोतलाई उधृत गर्दै भन्यो – ‘प्रविणको मृत्यू भएको ३्४ घण्टापछि मात्र एम्बुलेन्समा हालेर अस्पताल पुर्याएको हो ।’
मुद्धालाई दुर्घटनामा परिणत गर्न प्रहरीहरू नै संलग्न भएको पीडित परिवारको भनाई छ । पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिन पटक पटक प्रहरी कार्यालय जाँदा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोख्रेलले उल्टो थर्काएको मृतक प्रविणकी बहिनी दुर्गा वास्तोलाले बताईन् । प्रमाण नष्ट गर्ने र अ पराधीको संरक्षणमा प्रहरीकोे संलग्नता देखिन्छ ,दुर्गाले भनिन् ।
घटना अनुसार प्रविण पुस ४ गते बेलुका घर नजिकैको म रिमराउमा पुगेका थिए । त्यहाँबाट १ किलो मिटर पूर्वको सौरभी होटलमा प्रविण पुग्छन् र त्यहाँ होटल सञ्चालक कुमार राई लगायतले र क्सी खा न्छन् । र क्सी प्र विणले मात्र खा एको दावी प्रहरीको छ । यद्यपि जिउ थाम्न नसक्ने गरी र क्सी पि एको ब्यक्तिलाई लिएर रातको १० बजे पप्पु भनिने राजेश रणपहेली र प्रविण बदाम जुस लिन स्कुटर चढेर अलि पर सम्म पुगेको बताइन्छ ।
तीन वटा बदाम जुस लिएर प्रविण कहाँ पुगे न त प्रहरीको अनुसन्धान बोल्छ न उनको घटनामा संलग्नको आरोप लागेकाहरूले नै बोलेका छन् । त्यति मात्र होइन , मद्रासी फिल्म सैलीमा प्रविणलाई मा र्ने योजनाका लागि प्रविणलाई भोलिपल्ट जिस्क्याउने भन्दै घुरेको भिडियो खिच्छन् ।
मध्यरातको १२ बजे बनाएको भिडियो अहिले सम्म प्रविणका बाबु आमाले हेर्न पाएका छैनन् । त्यति मात्र होइन । १ बजेर १० मिनेट जाँदा प्रविणको मोवाइलबाट अ ज्ञात नम्बरमा २० रुपियाँ ट्रान्फर गरिन्छ ।होटलमा रिकेश सिवा भनिने मेहरमान दर्जी, दिपेश पौडेल ,राजेश रणपहेली र प्रविण मात्र रहेको भनिए पनि त्यहाँ अरु कोही ब्यक्ति भएको बास्तोला परिवारको दाबी छ ।
घटनामा संलग्नहरू कोही ला’गु कारोवारमा पटक–पटक प्रहरी हिरासतमा परेका र कोही मान्छे मा रेर फ रार भएको पृष्ठभूमिका मानिस भएकोले परिवारले अत्यधिक औ षध खु वा एर मा र को हुन सक्ने पी डित परिवारको आरोप छ । प्रहरीले घटना प्रति बेवास्ता गर्नु र न्यायलयले समेत कर्तब्य ज्या नको कुनै सम्भावना छैन् भन्दै मुद्धा मामिला नगर्न सुझाए पछि बास्तोला परिवार झनै आ क्रोषित भएको छ ।
यता इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोख्रेलले भने क र्तब्य ज्या नको कुनै प्रमाण फेला नपेरेकोले सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका सबैलाई छोडिएको बताए । उनले मृतकको शरीरमा कुनै चो ट, नी ल डा म पनि नदेखिएको बताए । उनले मिसिल मृत भएको छै्न्, अनुसन्धान सकिएको छैन्, प्रमाण फेला परे उनीहरू पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन् ।
Last Updated on: February 23rd, 2021 at 10:18 am